Amafutha adliwayo asetshenziselwa izinhlelo eziningi ekwenzeni ukupheka nokwenza ukudla. Ukukhishwa kwemishini kwamafutha adliwayo kuvimbela uwoyela ekuwohlokeni. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamafutha adliwayo kuyindlela ephakeme kakhulu yokukhipha uwoyela ezinhlanyelweni, izikhwebu nezithelo. Njengenqubo yokufaka isizinda esingafudumali, isizinda se-oyili esidliwayo sekhwalithi ephezulu kakhulu esidlula isivuno esithe xaxa kanye nesikhathi esincishisiwe sokwenza.
Ukukhiqizwa Kwamafutha Okudlekayo Kukhuliswa yiSonication
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusetshenziselwa kabanzi ukukhipha into ebalulekile yangaphakathi ezintweni zezitshalo. Okukhishwe okuhlosiwe kufaka phakathi i-lipids / fatty acid, amaprotheni, amavithamini, ama-polyphenols nezinye izinto ezihlanganisiwe. Njengenqubo ekhula ngamandla, ukukhishwa kwe-ultrasonic kwamafutha adliwayo, okufana ne-olive olive olive, i-avocado kawoyela, uwoyela wembewu sunlighter, uwoyela wefilakisi phakathi kwabanye, kwandisa ukukhiqizwa kwamafutha akhishwe (fatty acids), kufinyeze isikhathi sokukhishwa futhi kunciphise noma kugweme ukusetshenziswa kwe-solvent. Ukuba yindlela yokukhipha engasebenzisi amafutha, umgomo wokusebenza wokukhishwa osizelwe nge-ultrasonical usekwe kumcimbi we-acoustic cavitation. I-Acoustic aka ultrasonic cavitation idala amabutho amakhulu e-shear, okuphazamisa izindonga zeseli futhi kwandise ukudluliselwa kwesisindo phakathi kokuphakathi kweseli nokuxazulula okuzungezile. Lokhu kwenza ukukhishwa kwe-ultrasonic kube yindlela ephakeme uma kukhulunywa ngokukhishwa kanye nokuhlukaniswa kwezakhi ezihlanganisiwe ezitokisini zezitshalo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction of Oible Oils
akukho noma kuncishiswe ukusetshenziswa kwe-solvent
ikhwalithi ephezulu yokudla
I-Ultrasonic Processor I-UIP4000hdT (4kW) ukuthola okungeziwe kwe-oli yamafutha omnqumo.
Case Izifundo ze-Ultrasonic Edible Amafutha Ekhishwe
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuhloliwe futhi kufakazelwe ukuthi kusebenza kahle ngembewu ehlukahlukene yamafutha nezithelo.
I-Ultrasonic sunflower Amafutha Womhlaba
Moradi et al. (I-2018) iphenye ithonya lokukhipha okungasizakali okwenziwe ngokusetshenziswa kokukhiqizwa kwe-oyili nokwakhiwa kwezakhi zomzimba kusuka ezinhlanyelweni zejongilanga elingaxutshwe nalutho. Basebenzise a UP400S (400watts, 24kHz) ultrasonicator ukukhipha uwoyela we-sunflower ezinhlanyelweni zejongilanga usebenzisa i-n-hexane njenge-solvent.
Ukuze uhlaziye imiphumela yokukhishwa, u-oyela kwakudonswa futhi nge-ejwayelekile yebatch solvent kanye ne-Soxhlet ekhipha i-n-hexane kuzo zonke izindlela zokukhishwa.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kawoyela we-sunflower kunikeze isivuno esikhulu kakhulu samafutha nge-45.44 ± 0.27% kanye ne-23,71 ± 0.22% yezimbewu ze-sunflower ezingathulanga futhi zahanjiswa. Esikhathini esidliwayo esiningi se-sunflower esidliwayo besingaphansi kwe-4% kanye no-5% kawoyela osele wezinhlamvu ezingekho ngaphansi kwe-hulled ne-hulled.
Isikhathi sokukhishwa esidingekayo lapho kufakwa isizinda se-ultrasonic sincishiswe saba kuphela yi-105 min ngenkathi isizinda seSoxhlet sidinga ama-6 hrs kanye nokukhishwa kwe-solch batch kudinga isikhathi sokulungiswa kwama-hrs ayi-10.
Ukuhlaziywa kwe-gesi chromatography kubonise ukuthi isizinda esisetshenziswa nge-ultrasonic sisiza ikhwalithi yamafutha akhishwe kanye ne-α-linolenic acid kakhulu.
Igesi chromatogram kawoyela ekhishwa ezinhlamvwini ze-sunlighter enamanzi nge-ultrasonication
Isifundo neshadi ngo: Moradi et al. 2018
I-Ultrasonic Extra Virgin Olive Amafutha Isizinda
UServili et al. (2019) kuhlanganiswe i-4kW ultrasonicator I-UIP4000hdT ube umugqa ojwayelekile wamafutha omnqumo. Ukwelashwa okungamahhala kokunamathisela umnqumo nge-sonication kuthuthukisa ukusebenza kwenqubo yokukhuculula, kukhuphula umthamo wokukhishwa kwezinsimbi zamafutha omnqumo. Njengoba ukucindezela kuyinto ebalulekile, i-sonication yenziwa kusetshenziswa iseli lokugeleza kwe-ultrasonic nge-Cascatrode ku-3.5 bar. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic akuzange kubangele noma yiziphi izinguquko emikhakheni yekhwalithi esemthethweni esemthethweni futhi kubonise umthelela omuhle ekwakhiweni kwama-oli ama-olive omnqumo ongeziwe (i-EVOO) ekucindezelweni okuphezulu kwebha ye-3.5. I-Ultrasonic isize ukungasebenzi kahle kokunamathisela komnqumo kuphumela ezithelweni eziphakeme futhi ukwakheka okuhle kwe-EVOO.
Chofoza lapha, ukuze ufunde kabanzi mayelana nokususwa kwe-oyili eyodwa yamafutha omnqumo ongasatholakali!
UMartinez-Oadilla et al. (I-2018) ikhombisile esifundweni sabo ukuthi i-sonication isebenzisa i UIP1000hdT (20kHz, 1000W) ekwelapheni ukwelashwa kwe-avocado puree engalungisiwe ngenxa yokuvuselelwa okwengeziwe ngo-15-16% ukubuyiselwa kwamafutha okwengeziwe.
Qhafaza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhipha i-ukwanda kwamafutha ukwatapheya!
I-Ultrasonic Flaxseed Amafutha Wamafutha
UGutte et al. (2015) wasebenzisa i-ultrasonication ukukhipha uwoyela emhlabathini owenziwe ngefilakisi kusetshenziswa i-n-hexane njenge-solvent. Ngenye indlela, i-dichloromethane, i-petroleum ether noma i-ethanol ingasetshenziswa njengama-solvents. Isizinda se-ultrasonic sithuthukise isivuno sesizinda ngo-11.5% sisebenzisa inani elifanayo le-solvent kwisizinda esivamile. Ukuhlaziywa kwe-chromatographic kukhombisile ukuthi bekungekho miphumela ebalulekile njengokucekelwa phansi kwe-α-Linolenic acid (ω-3) ngesizinda se-ultrasonic. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-sonication inyusa isivuno sokukhishwa kukawoyela odliwayo futhi inciphisa isikhathi sokukhipha ngenkathi kugcinwa iphrofayili ephezulu yokudla okunempilo kawoyela we-flaxseed.
Imiphumela ye-Synergistic ye-Ultrasonic Amafutha Wokususa
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kungafakwa njengendlela eyodwa yokukhipha uwoyela kusuka ezinhlanyelweni nasezithweni ezicebile ngamafutha noma kungenziwa kuhlanganiswe noma kufakwe kabusha kufakwe kwizindawo ezivamile zokukhiqiza uwoyela ezikhona ukuze kukhule isivuno sekhwalithi nekhwalithi. Izinhlelo zokukhipha i-Ultrasonic zingafakwa kalula njengokwelashwa kwangaphambi noma kwangaphambi kokukhipha malsa, kuhlangene nokukhipha iSoxhlet noma ngemuva komshini wamafutha omshini noma umxoshi.
Imishini yokufakelwa kwe-Hielscher Ultrasonics ifakiwe kalula, idinga kuphela isikhala esincane kakhulu (i-footprint encane) futhi ngaleyo ndlela ingabuyiselwa futhi ibe yimishini kawoyela ekhona. Ngokuqina kanye nebanga lezimboni, abakwa-Hielscher ultrasonicators bezimboni bakhelwe ukusebenza okungu-24/7 ngaphansi komthwalo osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Khulisa isivuno sakho samafutha nekhwalithi nge-Hielscher Ultrasonics!
I-UIP4000hdT, iprosesa enamandla e-4kW enamandla okukhishwa kwamafutha adliwayo
I-High-Performance Ultrasonic Extractors Yokukhiqiza Amafutha Edible
Ekucutshungweni kwesigaba sokudla samafutha adliwayo kwinqanaba lezimboni, imishini yokusebenza ephezulu ye-ultrasonic iyadingeka ukucubungula imisinga emikhulu yembewu yamafutha kusistimu eqhubekayo yokugeleza. I-Hielscher Ultrasonics umphakeli osenesikhathi eside futhi omethembayo wemishini ephezulu yokusebenza kwesizinda se-ultrasonic, ehlanganiswe emhlabeni jikelele ezitshalweni zokukhiqiza ukudla.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher Ultrasonics 'asezingeni eliphezulu angalawulwa ngokunembile futhi anikeze opharetha ukulawula okugcwele ngaphezulu kwamapharamitha wenqubo ebalulekile anjenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi se-sonication.
Ububanzi obubanzi bezesekeli ezinjenge-sonotrodes (ama-probes), izimpondo zokuphakamisa, ukugeleza kweseli nokugeleza okuqhubekayo kunika amandla ukumisa uhlelo lokukhipha i-ultrasonic ngokuqondile ngezinto ezingavuthiwe ezisetshenzisiwe kanye nomphumela oqondiwe.
I-Hielscher Ultrasonic ephezulu yamandla e-ultrasonicators icubungula kalula amaslayidi ngokuqukethwe okuqinile okuningana, okusho isilinganiso esikhulu se-solids (imbewu) yokuxazulula
Ukulawulwa Kokushisa ngesikhathi sokucutshungulwa kwe-Ultrasonic
Njengoba ukukhishwa okusizwa yi-ultrasound kuyindlela yokucubungula engeyona eyokushisa, ukonakala okushisayo kwamakhemikhali okunomsoco obhekene nokushisa kungavinjelwa. I-Hielscher ultrasonic flow cell reactors iza nejacket yokupholisa ukushabalalisa ukushisa. Ngokwengeziwe, okokufaka kwamandla kungaguqulwa ncamashi nezimo zokucubungula ezilungile, isb ngokusebenzisa imodi ye-pulsation yesikhiphi se-ultrasonic. Isizinda se-ultrasonic samafutha adliwayo emazingeni okushisa aphansi sigwema ukubola okubangelwa ukushisa kwamafutha akhishiwe futhi kunciphisa ukulahleka kwamakhemikhali e-bioactive.
Amafutha adliwayo ngokuvamile awuketshezi ekushiseni kwegumbi, yize amanye amafutha aqukethe amafutha agcwele, njengamafutha kakhukhunathi, uwoyela wesundu kanye nowoyela we-kernel wesundu angaqina. Amafutha adliwayo ikakhulukazi awoyela bemifino kanye namafutha atholiswa ezithelo anjengamafutha omnqumo namafutha e-avocado. Amafutha emifino anjengotshani we-soya, uwoyela we-canola / i-rapeseed, i-oyela yommbila, uwoyela wethanga, i-sesame uwoyela, i-sunflower uwoyela, i-safflower oil, i-olive yamafutha wesundu, i-mustard oil, ioyili ye-seed pump, i-oyela yembewu kakhukhunathi kanye namanye uwoyela wembewu isetshenziswa njengamafutha okupheka nasesimweni sokugcotshwa (isib. ukugqoka kwesaladi, ama-marinade, amasoso, izindunduma njll.). Amafutha emifino asetshenziswa kakhulu njengokupheka kawoyela okuphekwe amafutha asuselwa ezilwaneni njengebhotela kanye ne-lard.
I-Margarine iyisikhala sebhotela esidumile esuselwa ku-oyela yemifino ocwengekile (isib. Kusuka kusafrofu, i-sunflower, u-soybean, i-cottonseed, i-rapeseed, noma i-olive yamafutha). Funda kabanzi mayelana nokukhiqizwa kwegalari eyi-ultrasonic!
Amafutha adliwayo afana ne-olive olive, i-rapeseed, i-oyili yelanga, noma uwoyela wembewu yamagilebhisi anganambitheka ngokuwafaka ngezitshalo ezinamakha ezinjengamakhambi (i-egrosemary, i-basil, njll), izithelo (isib. I-citrus, i-orange, i-raspberry), i-chillies noma ugaliki. I-Sonication isetshenziselwa ukufaka insimbi yemifino ngemifino ekhipha amakhambi. Funda kabanzi mayelana ne-maceration ne-infusion ye-ultrasonic!
amafutha namafutha – umehluko: Amafutha aqinile ekushiseni kwegumbi, kanti uwoyela uwuketshezi. Amafutha angenakugcotshwa afana nama-polyunsaturated nama-monounsaturated fatty acids angokwesigaba samafutha. Amafutha ikakhulukazi atholakala ezilwaneni futhi aqukethe amanoni acid amaningi. Amafutha ajwayelekile ayibhotela, i-lard ne-tallow.